မောင်ရင်ငတေ ** MAUNGYINNGATAY **** မောင်ရင်ငတေ ***: ** မွန်ဆီယာ အမှိုက်ပုံး ** *
အမှိုက်ပုံး အမှိုက်ကောက်မယ့် လူသားများထက် အမှိုက်ကောက်တဲ့ ဋ္ဌာနကြီး စနစ်တကျ တိုးတက်ဖွင့်ဖြိုး လာစေဖို့ မျှော်လင့်လျှက် . .. ....... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မွန်ဆီယာ အမှိုက်ပုံးကြီး ခင်ဗျား Les Poubelles et Eugène Poubelle
Container, Dustbin, Rubbish Bin, Garbage Can, Waste Basket, Dumpster
စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ စွန့်ပစ်ရာ အမှိုက်ပုံးကို ပြင်သစ်လိုကတော့
Poubelle လို့ ခေါ်ကြပါတယ်၊ အဲဒီလို
ပြင်သစ်လို Poubelle ပူဘဲလ် အမှိုက်ပုံးလို့ ခေါ်နေကြတာကို
နိုင်ငံကို မနေ့တနေ့ကရောက်လာတဲ့ နောက်ပေါက်ကောင်တွေ အပါအဝင် တော်တော်များများသော ပြင်သစ်စစ်စစ်
ဆိုသူတွေလည်း ဘာလို့ ခေါ်ရပါသလဲ . … ….. . ဆိုတာကို
… . …… . .. . …. . …. . ….. . . အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး
စဉ်းစားနေကြမယ် မထင်မိပါဘူး၊ ပူဘဲလ်
ညီမျှခြင်း အမှိုက်ပုံး . . … … .. .. …….
ဒီလိုသာ ထင်ကြ မြင်ကြပါလိမ့်မယ်၊
အဲဒီ Poubelle ဆိုတာ . .. .. .. .. ….
. . .. Eugène Poubelle ဆိုတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ အမည်ကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ၊ အဲဒီ
နာမည်ပိုင်ရှင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကတော့ ဒီကနေ့ (၁၆-၀၇-၂၀၁၅) ဆိုရင် ၁၀၈ နှစ် ရှိပါပြီ၊
အမှိုက်ပုံးတွေ ပေါ်လာတာကလည်း ၁၃၁ နှစ် ရှိခဲ့ပြီ ပြောရပါမယ်၊
အမည် Poubelle ပူဘဲလ် ဆိုတာကတော့ ပြင်သစ်တိုင်းရဲ့ နေ့စဉ်ပြောစကားတွေမှာ မပါမဖြစ်
Poubelle (၁၈၃၁-၁၉၀၇) ၁၈၈၄
ခုနှစ် မတ်လ ၇ ရက်နေ့မှာ ဒီကနေ့ ပါရီ စဲန်းမြစ်ဝှမ်းဒေသရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးဖြစ်သူ Eugène
Poubelle (၁၈၃၁-၁၉၀၇) က ပါရီမြို့ဝန်းကျင် လမ်းနဘေးတွေမှာ အမှိုက်ပစ်ခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့ပြီး
အမှိုက်ပစ်ဖို့ နေရာတွေအမှိုက်ပုံးတွေ သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီလိုနဲ့ ဒီကနေ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာလိုလို တွေ့မြင်လာ နေရပါတဲ့ အဲဒီ အမှိုက်ပုံးတွေကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေက အမှိုက်ပုံး စနစ်ကို စတင်တီထွင်ခဲ့သူ Eugène Poubelle ကို ဂုဏ်ပြုပြီး ခေါ်ခဲ့ ကြတာလား . . …. ဒါမှမဟုတ် ပြင်သစ်စကားနဲ့ အလွယ်တကူ ဘယ်လိုခေါ်ရမယ်မှန်း မသိကြပါလို့ သတင်း ဂျာနယ် တစောင်စောင်က တင်စားပြီး မွန်ဆီယာ ** ပူဘဲလ် ** * လို့ ခေါ်ခဲ့ကြရာကနေ .. ပါရီဇီယမ်တွေရော ပြင်သစ်နိုင်ငံ တဝှန်းလုံးကပါ လိုက်ခေါ်ခဲ့ကြတာလား .. … …… .. . . . … .နှစ်မျိုးစလုံး
မောင်ရင်ငတေတို့ခေတ် ပြင်သစ်ဘာသာ စာစကားမှာတော့ အမှိုက်ပုံးကြီးငယ် မှန်သမျှကို Poubelle
မွန်ဆီယာ ပူဘဲလ် ခင်ဗျား၊
Poubelles d'Español .. . . .... Cubo de basura အမှိုက်ကောက်မယ့် လူသားများထက် အမှိုက်ကောက်တဲ့ ဋ္ဌာနကြီး စနစ်တကျ တိုးတက်ဖွင့်ဖြိုး လာစေဖို့ မျှော်လင့်လျှက် . .. ....... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မွန်ဆီယာ အမှိုက်ပုံးကြီး ခင်ဗျား မောင်ရင်ငတေ